Somalia: Al-shabaab oo la sheegay in ay saldhigyo ku leeyihiin dalka Tanzania - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al-shabaab oo la sheegay in ay saldhigyo ku leeyihiin dalka Tanzania
Dowladda Tanzania markii ugu horeysay waxaa ay sheegtay in xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaallama Soomaaliya in ay saldhigyo ciidan iyo xarumo dadka lagu tashkiiliyo ay waddaan qorshe ay ka sameynayaan dhulka Keymaha ah ee ku yaalla gudaha Tanzania.
Xukuumadda Tanzania waxaa ay xustay in tan iyo 2016-kii Al-shabaab ay dhalinyaro ka qoranayeen daafaha magaalada xarunta ah ee Daar- Salaam.
Dowladda ayaa sidoo kale tilmaamtay in Al-Shabaab ay dhalinyaro badan ku tababareen Gudaha dalkaasi, kuwaasoo ay doonayaan in ay weeraraan xarumaha dowladda.
Simon Sirro Taliyihii hore ee booliska magaalada Daar- Salaam ayaa sheegay in dhawr jeer ay weerareen saldhigyo ay Al-shabaab ku leeyihiin degaannada baadiyaha ah gaar ahaan dhulka, waxaana uu sheegay in ay gaarsiiyeen khasaarooyin kala duwan.
Waxaa uu xusay in booliska Daar -Salaam ay gacanta ku dhigeen wiil 9 jir ah oo ay ka qabteen Xero ay ku weerareen Al-shabaab.
Dowladda Tanzania ayaa dhowr jeer sheegtay in weerarro ka dhacay gudaha dalkaasi ay ku tuhmeyso Al-Shabaab.
Somaliland: Xukuumadda Oo Xalay Saqdii Dhexe Xadhig Kaga Jawaabtay Qabanqaabada Xaflad Loo Ballansanaa In Maanta Lagu Caleemo Saaro Suldaan Cusub
Somaliland: Oo Shirkado Caalamiya U Wakiilatay Dhamaystirka Heshiiska DP World